Qayb Ka Ah Dabeecadda – Vol: 01 – Cad: 33 – Indheergarad
HomeSheeko-faneedQayb Ka Ah Dabeecadda – Vol: 01 – Cad: 33
October 9, 2019 Cabdifataax Dhegbahaaf Sheeko-faneed 0
Indheergarad – Oktoobar 09, 2019 – Koodaar – Vol: 01 – Cadadka: 33aad
Dhexdooda waxba uma dhexeeyaan, faraha luguhiisu kakan waxay qarka u saaranyihiin in ay taabtaan lugaheeda jilicsan ee aadka u qaboow. horaadadeeda soo taagan ibtoodu waxa ay marba taabanaysaa laabtiisa marna dib uga dabcaysaa, waxaad u malaysaa awoodda dhaqaaqa ibteeda hagaysa in ay tahay hadba neefta ay jiiddo iyo midda ay tufayso inta ay le’eg yihiin..
Roob ayaa markaas uun qaaday, dhulka badankiisu weli waa qoyaan. Hawada waxaa ceegaagta caraf udgoon oo cid walba raalligelinaysa. Waxa uu ka soo baxay makhsinkiisi, isagoo Is diidsiinaya xaqiiqada ah inuu qolkiisa yar dhibcaha roobka uga dhuuntay. Weligiiba wuu is weydiin jirey sababta dadku roobka u jecel yihiin haddana mar walba oo daruurtii la naawilayey da’do ay dhibcaha uga cararaan. weli arrinkaa jawaab uma uusan helin, aad wuxuu isku weyddiin jirey markii uu Addis Ababa ardayga ka ahaa, halkaas roob ayaa badanka ka di’i jirey. Waxa uu had iyo goor arki jirey magaaladaa mashquulka badan kol walba oo dhibici hoorto iyadoo dadka badhna ka rooraan inta ay roori karaan, badhna dallad ka huwadaan roobka. marmarka qaar dadku waxay doonayaan iyo waxay diidayaan ma kala guri karaan.
Soo bixistii uu qolkiisa ka soo baxay wuxuu u soo dhaqaaqay dhankaa iyo baalakoonka, kaas oo aan ka fogayn qolkiisa jiifka. Wuu dhoollacaddeeyey, malaha wuxuu u riyaaqay in ay wax walbi u yaallaan sidoodi roobka ka hor, Waxaa muuqda kursi kuwa dhabarka ku tiiriga leh ah, loox laba lugood leh oo uu ku dhex jiro alwaax afar geesood ah. Kursiga iyo alwaaxa iska soo horjeeda waxaa dhex yaal miis yar oo gaaban, kaas oo ay dul saaranyihiin ranjiyo midab kala duwan leh, kuwaas oo badh isku qooshanyihiin, oo aad mooddid in madaxa la isu geliyey, qaar ka kalena mid walba kaligiis u yaal. Burushyo fara badan oo mid walba afkiisa hore midab gaari ka xoqan yahay, masaxaad iyo gacmo-gashiyo laba ah oo kala uskag badan. Miiska hoostiisa waxaa yaal xoogaa haruur ah oo bac khafiif doc ka doloosha ku jira.
Wuu fariistay kursigiisi isagoo indhaha la yara raacaya daaradda guriga, dabcan inta ishiisu qabato ee wajahaddiisa ku beegan. halkaa waxaa uga muuqda dhir dhowr ah oo kala joog dheer, kuwaas ay ka tifqayaan dhibco biyo ah, ayna ruxayso yal–dabayl qaboow. Aayar ayuu gacantiisa midig ugu soo haabtay bacdii dhulka taallay, xoogaa haruur ah ayuu ka soo xaabsaday dabadeed waxaa uu ku sayriyey daaradda. Deedna dib kursigiisi ugu fariistay isagoo gaatamaya. Xaalka uu ku jiraa waxba kama yara tan uu dareemo kalluumayste shabaagtiisa badda u ritay, Isla markaana naawilaya kulluun ku filan In uu u soo dabmo. Isaguna sidaas oo kale wuxuu sugayaa hadhuudhka uu dhulka u tuuray shimbiro qurux badan inuu galabta u soo dabo.
Waxba kama soo wareegin jeer durba shimbiro dhowr ahi soo martiyaan aqalkiisa. iyagoon inna wax kala ogayn ayeey bilaabeen in ay quudkoodi halhal u gurtaan. Haaheey, Markan kursigiisi uu ku tiirsanaa ayuu ka soo yara toosay, durba waxa uu bilaabay In uu guda-galo sidii uu shaqadiisa u qabsan lahaa isagoon marna haadda wax dareensiin.
Galoofiskii ayuu aayar gacmaha gashtay, burush uu alwaaxa mariyo sawirka ka horna saxarka uga qaado ayuu qabsaday. Haa, waxaa uu u gacmo xaytay inuu shimbiraha sawiro. Sawir-gacmeedku weligiiba wuxuu ahaa hobbi iyo hibo gaarkiis gudaha uga jirta. Balse waxa ku milanka iyo ka dhabaynta arrinkaa u fududaatay intii uu Addiis joogay. Iyadoo ay u socoto tacliintii uu magaalada barashadeeda u tagay ayuu haddana ku dul waday barashada xirfadda farshaxannimo ee uu weligiiba jeclaa. Haaheey, Intii uu cilmi kororsiga tooska ah bartanka Itoobbiya–Addiis u joogay marna kama qoommamayn. Waayo halkaas ayaa ahayd meeshii wax badan uu ka bartay, meeshii dunida darafyo badan oo kala duwan inuu ka arko u sahashay meeshii maankiisa dhistay masiirkiisa dambena jihaysay.
Wuxuu weli tartiib wado sawirka farshaxan, shimbiraha quruxda badan, dushoodu na weli qoyaankii roobka laga dareemayo. Iyadoo marba midi kor boodayso oo biyaha iska jafayso, deedna aayar hadhuudh cunkeedi iyadoo kifaaxsan ugu soo noqonayso.
Jabaq ayuu xaggiisa dambe ka dareemay, balse waxba ma jalleecin ee hawshiishi ayuu sii watay. Daqiiqado kadib, hal mar ayuu arkay wax dhulka si fudud dhalow ku yiri iyo shimbirihii oo duulay. Dib ayuu ugu soo jeestay dhabarkiisa iyo ruuxa taagan, isagoo wajiga caro aruurinaya. labadiisa suunniyood iyagoo aad moodo raalli in aanay ka hayn ayuu isu keenay. Qac, indhaha wuxuu ku dhuftay ruuxii dabo taagnaa, mise waa xaaskiisi Ladan oo is marmaroorinaysa, iyadoo taagan ayey haddana dhaqdhaqaaq baaq iyo is jilcini ka buuxdo samaynaysaa. hoogto may saani u istaagto!
Gacanta midig dhowr xabbo oo timir ah ayeey ku haysataa, afka na midh timir ah oo ay si xiiso leh u muudsanayso ayaa ugu jirta. Gacanta bidix timihii ay soo maydhan oo weli badh qoyan ayey marba isaga qabanaysaa; si aysan cankeeda iyo isha bidix u daboolin iyadoo dhoollacaddeyn aan soo wada bixin daanka la godaysa. waxa kaliya ee ay xirantahay waa diric baati ah oo aan waxba ka hoosayn waxna uga korrayn. Maxayba intaa hu’ ka badan xidhashadooda ku falin sow aqalkeedi ma joogto? hoygaaga haddii aadan u nafisayn hoy kuuma noqdo.
Hal mar ayaa wajigii uu markii hore aruurinayey is furay, si nacasnimo leh ayuu markan wajigiisi caraysnaa mid dhoollacaddeyn yari ku dheehan tahay isugu rogay.
-” Ladaneey garan maayo anigu waxa aad iga damacsan tahay… maxaad haadda iiga duulisay? walaal waad og tahay in aan faraha hawl kula jiro” Ayuu yiri isagoo gacanta midig burush ku haysta, iyadana jalleecaya.
-” Dee kas iyo maag” Ayey tiri iyadoo suur iyo kalsooni dheeraad ah muujinaysa.
-“gacaliso maad iga daysid ciyaarta, miyaanan abuurka Ilaahay iyo dabeecaddaa isku qoofalan ee quruxda badan kaa sawiri karin? Sidee Alle kuu galay ?” Ayuu su’aalay isagoo weli ka gam’i la’ jawigii ay ka burburisay daqiiqado yar ka hor.
Way soo yara dhaqaaqday hal tallaabo, si deggan aad moodid In ay dhulka u turayso.
-” Miyaad is yeelyeelaysaa Ridwaankaygiyoow, soow adiga anigaba ii jeeda maaha.. Anigu miyaanan ka mid ahayn abuurka Ilaahay ? Miyaanayn qayb ka ahayn deegaankaa quruxda badan? Horta Ridwaanoow, goorma ayaa kuugu dambaysay in aad I tiraahdid: “Ladaneey kaalay, oo i soo hor fadhiisto aan ku sawiree.. ?” Waxay ku furtay markan Ladan saygeedi mawjado kala duwan. hase ahaatee qushiisu waa dareensan yahay intay xustay qaybteed ama intaba in ay ku gar leedahay.
Daqiiqad aamus ah oo afkiisu juuqi waayey ayaa la galey, hase ahaatee aad moodaysid indhaha inuu ka hadlayo. Kor iyo hoos ayuu indho inanta dhowranaya ku eegay. Ax, mise qoftu jawhartiisi uu dheddig oo dhan iyada kaligeed kala dhex baxay. wuu soo yara kacay, isagoo weli iyada ay ku maqanyihiin indhihiisu, ma iyagaaba ka miliqsan kara maanta. Burushkii aayar ayuu u fasaxay, isagoo aad mooddid Inuu leeyahay “waar ha i sii deyn ee i sido.” Laba tallaabo markii uu soo qaadayba, waxa uu hortaaganyahay Ladan. Dhexdooda waxba uma dhexeeyaan, faraha luguhiisu kakan waxay qarka u saaranyihiin in ay taabtaan lugaheeda jilicsan ee aadka u qaboow. Horaadaheedaheeda soo taagan ibtiisu waxa ay marba taabanaysaa laabtiisa marna dib uga dabcaysaa, waxaad moodaa awoodda dhaqaaqa ibteeda hagaysa in ay tahay hadba neefta ay jiiddo iyo midda ay tufayso inta ay le’eg yihiin.
Ladan madaxeeda kor ayay u soo yara qaaday, iyadoo isaga aan marna dareensiinayn in uu ka madaxtaaganyahay. Waxa ay sidaa u yeelayso waa ay og tahay, keliya waa si aanay indhaheedu uga miliqsan kuwiisa caawa sida ugub u eegaya. Isaguna aayar ayuu galoofyadii gacmaha ugu jiray mid walba markeeda u siibay isagoo aad mooddid inuu uurka ka leeyahay “Halkaa iiga hara uskagyohow.” Dabadeedna gacantiisa midig dhabarkeeda inta uu soo mariyey isku soo nabay Ladan. Haa, dhexdeedi yarayd ayuu shantiisa farood iyo calaasha ku balaariyey. Jac, sida hillaaca ayaa jirkooda Iftiin wada jir ahi uga kacay. Markan Ladan hoos ayey xishood eegtay, ma oga isagu waxa uurkeeda ku jira balse kaliya waxa uu arkaa timaheedi oo wajigeeda ku soo yara daatay. Gacantiisa midix oo camal la’aan la laadlaadday ayaad mooddaa halkaas jaanis cusub In ay ka heshay. Way soo dhaqaaqday gacantii, ka dibna Ladan oo hoos ku maqan ayey madaxa kor ugu soo qaadday iyadoo garka aayar u qabanaysa, Isla markaana waxay bilawday bidixdiisi in ay timaha Ladan ee wajigooda weerarka ku haya halkoodi hore ku celiso.
Si taxaddar iyo dhaqaalaysi leh ayaa inta uu tin qabashadii dhafoorkeeda ka bilaabay dhegteeda dusheeda ku joojiyey. Dabadeed na yiri:
– ” Haye, maxaad I tiri gacaliso. igu soo celi hadalkii hore…?”
– ” Waxba qaali.. soow adiga i ilowsiiyey wax walba.”
– “Qaali, sideen adiga oo i hor jooga abuur kale ugu habsamaa.. soow ma ogid inaad bilawgayga tahay? ayuu su’aalay iyadoo aysan hadalkiisa raalligelin hore iyo xodxodasho hor lihi ka marnayn. Dhoosha ayeey ka qososhay Ladan, deedna aayar ayey dib ugu bilawday in ay u shaqo geliso afkeeda iyo muudsigii timirta. Dhaqdhaqaaqa dheelliga tiran ee ay samaynayaan daankeeda iyo bishmaheeda bilaa libista ah iyo dhuunteeda marba aayarka wax u roorayaan ayaa dareen dheeraad ah ku dhaliyey Ridwaan.
Wuxuu bilaabay markan afka inuu nasiyo oo gacanta ka hadlo. gacantii midig ee uu xagga dambe kaga hayey ayuu aad ugu xejiyey jirkeedi, mar kale ayey dhab isagu marmeen. Deedna wuxuu bilaabay bidixdiisa inuu mariyo daankeedi liishada ahaa ee saamuun dhoofta lagu soo maydhay ilaa qoorteeda qaab ka qoran u samaysan. “Sidii aad u dhalatay, dheehii u lee yihiin weli dhabanadaaduye…” Isagoo uurka ka qaadaya heeska Ina Nuur Giriig. Ladan waxay joojisay muudsigii iyo calashigiiba, taas baddelkeeda waxay bilawday in ay marba docda uu gacanta marinayo madaxa iyo garabka aayar isugu qabsato, marna kala fujiso iyadoo dhoollacaddeynaysa dareenna buuxda.
Waa kaas, roobkii ayaa dib u bilawday, shuux hor leh balse u muuqda in ay ka dambayso daruur muddo di’ doonta. Hal mar ayuu kor gabigeedaba u qaatay, wuu la dhaqaaqay iyadoo indhahooda il walba isha dhigeeda ku dhaygag iyo kalgacal ashqaraarsantahay, jeer uu qolka jiifka la galay iyadoo raalli ka ah sida xaal u socdo. Ladan, waa og tahay saygeedu halka uu u sito iyo waxa dhici doona labadaba. Waana inta ay rabtay in uu u dhugyeesho una soo jeesto iyada quruxdeeda qiimana u siiyo sida uu ugu jeesto had iyo goor roobka, jeegaantiisa, farshaxanka, dhirta ugub, haadda iqk.
Quruxda deegaanku waa inaga iyo hadba inta inagu xeeran. Dhirta uu ubaxu ka mid yahay, dhulka waxa saaran ee ciidda iyo dhagaxu ka mid yihiin, haadda noocyadeeda kala duwan, bisadda aqalkaaga u soo wareegta, roobka iyo jeegaantiisa, dadka, qoyskaaga, xaaskaaga, ilmahaaga iyo waalidkaa, Intaas iyo in badan oo kale oo isku qoofalan ayaa qayb ka wada ah deegaanka. Kuwaas oo mid ba midka kale bilo oo buuxiyo. ka war haynta badqabkooda iyo ilaalinta dheellitirka jeclaantooda ayaa quruxdeena ah. Haa, iyaga oo dhan ayaa quruxdeena ah.
W/Q: Cabdifataax M. Cabdi “Dhegbahaaf”